Xeer qeexaya dib u celinta deeymaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Deeymaha guryaha lagu qaato. Sawirle: Fredrik Sandberg/TT
Xeer qeexaya dib u celinta deeymaha
La daabacay torsdag 17 mars 2016 kl 16.00
Xubnaha baarlamanka oo heshiis ku wada gaarey niaamka dib u soo celinta deeymaha guryaha lagu qaato.
Laga bilaabo bisha juun ayuu khasab noqon doonaa nidaamka dib u soo celinta deeymaha hooyga lagu qaato ee lagu magacaabo – amorteringstvång ee dhammaan ddyoowga deeymaha cusub guryaha ku qaata, sida ey heshiis guud ku wada gaareen xil-dhibaannada baarlamanku maanta.
25-kii sannadood ee ugu dambeeyey ayey aad kor ugu kaceen deeymaha lagu leeyahey bulshada Sweden, kuwaasina oo ka sare-marey dakhligooda. Halka dhanka kale aaney shuruudaha bangiyadu ku xiraan dib u soo celinta deeymahaasi aaney hoos u dhigin kor u kaca deeymaha. Hasee yeeshee uu baarlamanku maanta ka xeereeyay laga bilaabo 1-da bisha juun xeer ku khasbaya dadyoowga deeymaha ku qaata guryaha in lagu khasbo iney dib u soo celiyaan deeymaha. Shuruudaha xeerka ku qoran ayuu ka mid yahay in deeymaha la celineyaa noqdaan 2%, waana deeymmo u dhigma 70% ama in ka badan qiimaha guriga.
Shuruudda xeerkan ayaa laga reebey deeymaha loo qaato guryaha cusub muddo shan sannadood ah, sida uu sheegay Erik Ullenhag oo ka tir-san xisbiga Liberalerna.
- Sababta aannu uga reebney guryaha cusub muddo shan sannadood ah waxay tahay in aaney hor-joog-san dhismaha guryo hor leh.
Doodo ballaaran oo beryahanba ka socday deeymaha xad-dhaafka ee bulshada Sweden hadba sii culeeysineya, isla-markaana ey bangiyadu ku sii adkeeyneyeen shuruudaha deeymaha lagu qaato ayuu haddaba sidan ku macneeyay Ulf Kristersson, kana tir-san xisbiga modaraterna.
- Waxey ku bilaabatey bangiyada oo doonayey iney xal u helaan iyaga oo heshiis la galayey cidda deeynta qaadaneeysay. Hase yeshee ay hayadda tartanku fikirkaa ka hor-timid, sheegtayna in loo baahan yahay in xeer laga dejiyo. Safar dheer ayaa loo soo marey. Anigoona aamin-san in iminka ay caddaatay in loo baahan yahay dhaqan cusub oo deeymaha lagu celiyo, waana midda iminka la xeereeyey.